दृष्टिकोण « Tuwachung.com
आजदेखि हजुरकी छोरी, हाम्री छोरी हुन् । यिनी हाम्रो घरकी लक्ष्मी हुन् । हामीलाई चाहिएको असल बुहारी हो । दाइजो केही पनि दिनुपर्दैन । यो
नेपालका अनेक जातजातिमध्ये एक हो राई । आफैंमा बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मानिन्छ किरात राईहरूलाई । राई जातिको विविध हाँगोमध्ये एक हो कुलुङ । कुलुङ भनेको के हो ? यो पेसाको
भूतपूर्व ब्रिटिस आर्मी क्याप्टेन टंकबहादुर लिम्बू (२११६०११८) संवत् २००७ मा धनकुटाको डाँडाबजारमा जन्मे । लिम्बू सन् १९७१ मा भर्ती भए । सन् १९९८ मा ‘रिटायर’ भए । टेन जीआरमा कार्यरत
‘नीङ् छेइलःम्’ राष्ट्रिय मासिक (वर्ष १, अंक १, २०६८ साउन) पत्रिकामा ‘यसरी भयो कुलुङ जातिको निर्माण’ शीर्षकमा राजधन कुलुङको लेख प्रकाशित छ । उक्त लेखका केही अनुच्छेदमाथि निम्नअनुसार विमति र
इतिहास, मिथक, साहित्य वा समग्र वाङ्मय मानव जीवन र प्रकृतिसँगको सहचार्य, सामाजिक अन्तरघुलन र मानवीय स्वकीय चेतनाको विकास र विस्तारको क्रममा जन्मिएको हो । मानिसले जीवनयापन गर्ने क्रममा प्रकृतिसँग अनवरत
प्रिय साथी तिमीले मेरो हाल सोध्छौ । मेरो भविष्यको चिन्ता गर्छौ । त्यही भएर तिमी मेरो असल साथी हौ । धेरै पछि तिमीलाई चिठी लेख्दै छु । मलगायत गाउँघरको खबर
सोमबार १६ जुलाई १९४५ को त्यो दिन, जब बिहान ५ः३० बजे विश्वको प्रथम परमाणु बम परीक्षण गरियो, त्यो घटनालाई कसैले पनि बिर्सन सक्दैन । यसको परीक्षणका निम्ति अमेरिकाको लास अलाभोसबाट
सइराक्युजको राजा हिरो द्वितीय पराक्रमी योद्धा तथा देवताहरूका महान् उपासक थिए । उनी प्रत्येक विजयलाई कुनै न कुनै देवतालाई एउटा उपहार चढाएर मनाउने गर्थे । उनले यो काम पूरा गर्ने
१०० पूर्णांकको गणितमा ११० नम्बर पाउने वैज्ञानिक
उच्चशिक्षामा भौतिकशास्त्र र गणितको अध्ययन गर्ने सबैले बोस आइन्स्टन सांख्यिकीको अध्ययन गर्छन् । नयाँ प्रकारको सांख्यिकीको विकास १ जनवरी १८९४ मा भारतमा जन्मेका प्रोफेसर सत्यन्द्रनाथ बोसले गरेका थिए । उनको
आदरणीय घरबेटी आमैमा नमस्कार । कोठा छाडेपछि एउटा पत्र तपाईंको नाममा लेख्न मन लाग्यो । यो गनगन पढेर तपाईंको कि त चित्त दुख्ला कि त चित्त बुझ्ला भन्ने विश्वास लिएको
धर्म के हो ? असल कर्म नै धर्म
हुन त धर्म, संस्कृति, दर्शन, ज्ञानजस्ता गम्भीर तथा विशिष्ट विधाबारे यो छोटो आलेखमा प्रकाश पार्न खोज्नु, बुझाउन खोज्नु मेरो असम्भव प्रयास हो । यद्यपि, केही छोटो भए पनि यी विषयमा
बाँच्न पाए त हो नि हाँस्न सकिने
निःशब्द छु । मनभरि शुन्यता छ । मस्तिष्क त्यस्तै । भौतिक शरीर बन्द कोठामा कैद छ । हातले कलम, किताब, कापी समाउन मानिरहेको छैन । मनमा अनेकन भावना अंकुराइरहेका छन्
फुर्सदको समय । के काम गर्ने होला ? मनमा खुल्दुली भइरहेको थियो । श्रीमती ज्योति रुम्दाली र जेठान ज्ञानेन्द्र रुम्दालीले संयुक्त रूपमा २०७५ मा एकीकृत स्रोत व्यवस्थापन प्रालि स्थापना गर्नुभएको
कुनै घरको वास्तविकता बुझ्न त्यो घरको शौचालय हेरे पुग्छ भने कुनै देशको वास्तविकता बुझ्न त्यो देशको सार्वजनिक यातायातको अवस्था हेरे पुग्छ । नेपालका हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रमा हेर्दा सार्वजनिक
उच्च शिक्षा अध्ययन, योग्यताअनुसारको अवसर र सहज जीवनयापनको सपना बोकेर विकसित देशहरूमा नेपाली विद्यार्थी जाने दर बढ्दो छ । अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान, न्युजिल्यान्ड, क्यानाडा र युरोपका विभिन्न देशहरूमा बर्सेनि ठूलो
हाम्रा स्कुल कसरी चलेका छन् ? सहरका पढाइमा के अन्तर छ ? बालबालिकाले कसरी पढाइ अघि बढाएका छन् ? कसरी सिकिरहेका छन् ? बुझ्न म सरकारी र निजी स्कुल गइरहें
परिवर्तनका लागि मैले क्रान्तिको आह्वान गरें । क्रान्ति साध्य हो, साधन होइन । त्यसैले मैले एकतन्त्रीय शासन व्यवस्था अन्त्यका लागि संगठन निर्माण गरें । त्यही संगठनलाई नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टी
नेपालमा कृषिलाई पेसा बनाउने कम छन् । यहाँ कृषि प्रणाली परम्परागत रूपमा गर्दै आएको पाइन्छ । यसबाट खासै उत्पादन राम्रो नभए पनि नेपालका हरेक गाउँ, बस्ती, तराई, पहाड र हिमालमा
जीवनका सबै अनुभूति लेखनीय हुँदैनन् । केही अनुभव त्यस्ता हुन्छन् जसले वर्तमानका चुनौती सामना गर्दै अगाडी बढ्ने शिक्षा प्रदान गर्छन् । त्यसैले जीवनका केही अनुभवमध्येका पनि विशिष्ट कालखण्डका अनुभूति लेख्ने
राई लेख्दा कुलुङ संस्कृति कसरी मासियो ?
‘तुवाचुङ डटकम’ अनलाइन पत्रिकामा शरण राईको लेख ‘चाक्चाकुर : तथ्यहीन काल्पनिक चाड’ (२०७७ माघ ९) प्रकाशित भएपछि पहिलो टिप्पणी निनाम लोवात्ती कुलुङको देखापरेको छ । तर, उनको चासो विषयवस्तुप्रति छैन